Nay Lin Archives - Tameelay
အိမ်ထောင်ရေးမှာ အဆင်ပြေဖို့ နားလည်မှုကအရေးကြီးတယ်။ ကိုယ့်ဘက်ပဲကြည့်ပြီး သူ့ဘက်နားမလည်ပေးနိုင်ရင် အဲ့ဒီအိမ်ထောင်ရေး ရေရှည်တည်မြဲမှာမဟုတ်။ကိုယ်တိုင်လည်း အရင်ကဆို အမြဲစကားများတယ်။ရန်ဖြစ်တယ်။နောက်ပိုင်းတော့ အတတ်နိုင်ဆုံးနားလည်ပေးလိုက်တယ် ။ အားလုံးအေးချမ်းသွားတယ် ။ နောက်တစ်ခုက ကိုယ့်အိမ်တွင်းရေးကို ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောတာအကောင်းဆုံးပဲ။ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကိုယ့်ကိုနှစ်သက်သဘောကျတဲ့သူရှိသလို အကောက်ကြံမယ့်သူတွေလည်းရှိတယ်။မလိုတဲ့သူတွေက အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေလေပိုကြိုက်လေမို့ ရန်ဖြစ်အောင်ရန်တိုက်ပေးမှာ အမှန်ပဲ ။ ဒါကြောင့် ဘယ်သူ့ကိုမှ အတတ်နိုင်ဆုံး ရင်မဖွင့်မိစေနဲ့ ။ နောက်တစ်ခုက ထစ်ကနဲဆို လိုင်းပေးမတင်နဲ့။လိုင်းပေါ်တင်လိုက်လို့ ဘာအကျိုးကျေးဇူးမှမရှိဘူး ။ ကိုယ့်အကြောင်း လူသိတာပဲ အဖက်တင်တယ် ။ ဒါကြောင့် ဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခုဆို လိုင်းပေါ်မတင်ပါနဲ့ ။ နေလင်း(သမီးလေး) အိမ္ေထာင္ေရးမွာ အဆင္ေျပဖို႔ နားလည္မွဳကအေရးၾကီးတယ္။ကိုယ့္ဘက္ပဲၾကည့္ျပီး သူ႔ဘက္နားမလည္ေပးႏိုင္ရင္ အဲ့ဒီအိမ္ေထာင္ေရး ေရရွည္တည္ျမဲမွာမဟုတ္။ကိုယ္တိုင္လည္း အရင္ကဆို အျမဲစကားမ်ားတယ္။ရန္ျဖစ္တယ္။ေနာက္ပိုင္းေတာ့ အတတ္ႏိုင္ဆံုးနားလည္ေပးလိုက္တယ္ ။ အားလံုးေအးခ်မ္းသြားတယ္ ။ … Read more
Categories Tameelay Knowledge Tags 24, Nay Lin
အားလုံးဟာကိုယ့်ဘဝနဲ့ကိုယ်ပါပဲ . . .သူများသုံးတိုင်း သူများဖြုန်းတိုင်း လိုက်မဖြုန်းချင်ပါနဲ့ ။ ကိုယ့်ဘဝကိုယ်နားလည်ပါ ။ မင်းသမီးတွေအတွက် အလှအပဟာ သူတို့ရဲ့အဓိကဖြစ်တဲ့အတွက် လှအောင်ပြင်မယ် ဈေးကြီးတဲ့အလှကုန်တွေသုံးမယ် ။ ဈေးကြီးတဲ့အဝတ်အစားတွေဝတ်မယ် ။ အဲ့လိုပြင်တာ ဝတ်တာတွေဟာ သူတို့ကို ဝင်ငွေတိုးစေတယ် ။ ကိုယ်က သူတို့ကိုအားကျပြီး သူတို့လို သုံးမယ် ဝယ်မယ် ဝတ်မယ်ဆိုရင်တော့ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ . . . ကိုယ်လှလို့လည်း ဘယ်သူမှ ကြော်ငြာခေါ်မရိုက်ဘူး ။ ဘယ်သူမှ ပိုက်ဆံမပေးဘူးလေ . အဓိကနဲ့သာမည ခွဲခြားတတ်ပါစေ . . . မင်းသမီးလေး facebook ပေါ် Like တွေရရင် ကြော်ငြာတွေ အပ်လို့ ပိုက်ဆံတွေရတယ် ။ အဲ့အတွက် လူကြိုက်များမယ့်အရာတွေတင်တယ် … Read more
စိုက်ခင်းထဲကပေးတဲ့ ဘဝသင်ခန်းစာ ဒီနေ့အလုပ်လေးနားတော့ ခြံထဲအလည်ရောက်ဖြစ်တယ် ။ ကိုယ်နှစ်သက်လို့စိုက်ထားတဲ့အပင်တွေကျတော့ ရေလောင်းပေါင်းတင်လုပ်ပေးမှ ကြီးထွားရှင်သန်လာတာ ။ ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျဖြစ်လာတယ် ။ ၁ လလောက်ဂရုမစိုက်ပဲပစ်ထားတဲ့အခါ ဖြစ်ချင်သလိုဖြစ်နေတာ တွေ့ရတယ် ။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း မြက်တွေ ပေါင်းတွေနဲ့စုံလို့ ။ ဒါလေးကိုမြင်တော့ ဘာကိုတွေးမိလည်းဆို ။ ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလည်း အကျင့်ကောင်းတွေ အကျင့်ဆိုးတွေဆိုတာရှိတယ် ။ ကောင်းတဲ့အကျင့်ဖြစ်ဖို့ သေချာဂရုတစိုက် ပြုစုပျိုးထောင်ပေးဖို့လိုသလောက် မကောင်းတဲ့အကျင့်ဖြစ်ဖို့ကျ ဘာမှကိုမလိုဘူး ။ သူ့အလိုလိုဖြစ်လာတာ ။ ကိုယ်ဟာ သီးနှံကောင်းကောင်းဖြစ်ထွန်းချင်ရင်တော့ အပင်ကို ပြုစု ဂရုစိုက်ဖို့လိုသလို မလိုတဲ့ မြက်တွေ ပေါင်းတွေကိုလည်း ရှင်းလင်းပေးဖို့လိုတယ် ။ အဲ့လိုပဲ ဘဝမှာလည်း အောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ လူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ဆိုရင် အကျင့်ကောင်းတွေကို လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့လိုသလို မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေလည်း စွန့်ပစ်ဖို့လိုတယ် . . … Read more
Categories Tameelay Knowledge Tags 15, Nay Lin
လောကမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာအချစ်ဆုံးတဲ့ ဟုတ်မနေဘူး . . .ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာ မချစ်ဆုံးလို့ပြောရင် ပိုမှန်မယ်ထင်တယ် . . ဘာတွေကြောင့်လဲဆိုတော့ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် နေချင်သလိုနေ နေကြတယ် ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တကယ်ချစ်ရင် ဒီလိုနေပါ့မလား ။ ကျန်းမာရေးအတွက် ဘာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖြစ်လဲ . . .ဘာမှ မလုပ်ဘူး ။ အိပ်ချိန် တစ်ရက် ၈ နာရီအိပ်ရမယ်တဲ့ စောစောအိပ်စောစောထရမယ်တဲ့ . . .ဘာမလိုက်နာဘူး ညသန်းခေါင်ထိမအိပ် . . .မနက်ဆိုလည်းမထနဲ့ ။ အစားအသောက်လား ပါးစပ်ထဲအရသာရှိရင်ပြီးရော တည့်တည့်မတည့်တည့် စားနေကြတာ . . ပြောတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ချစ်တယ်တဲ့ ။ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ရေတောင် တစ်ရက် ၅ လီတာလောက်သောက်သင့်တာကို ရေ … Read more
Categories Tameelay Knowledge Tags 04, Nay Lin